http://www.edu.mysteryzillion.com တွင် သင်တန်းတက်နေကြသူများသို့ — MYSTERY ZILLION
http://www.edu.mysteryzillion.com တွင် သင်တန်းတက်နေကြသူများသို့
August 2008 edited June 2013 in MZ News
http://edu.mysteryzillion.com တွင် သင်တန်းတက်နေကြသူများသတိပြုရန်မှာ ...
မိမိ စာရင်းပေးသွင်းထားသော အတန်းတစ်ခုခုကို ရက်ပေါင်း(၁၂၀) အထိ ၀င်မကြည့်ပါက၊ သင်တန်းသားစာရင်းမှ အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ယင်းမှာ အသုံးပြုထားသော moodle application ၏ အလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်ချက်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း ...။
မိုက်သားပဲ... တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျ... ကျွန်တော်လည်း အဲလိုလေး ဖြစ်စေချင်တာ....
့http://edu.mysteryzillion.com တွင် သင်တန်းတက်နေကြသူများသတိပြုရန်မှာ ...
အနော်ကကျောင်းခဏခဏပျက်တယ်။ ဒါဆိုရင်ပုံမှန်တတ်မှဖြစ်တော့မယ်။ မပြေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှ။
ဒုက္ခပဲ ဒီတိုင်းဆို sign up တစ်ချိန်လုံးလုပ်ရမယ့်ပုံ။
ကောင်းတော့ ကောင်းတယ်။ဒါမှ ကျောင်းမှန်သူတွေပဲ ကျန်ခဲ့မှာ။
ကျွန်တော် ထင်တာတော့ Sign Up ပြန်လုပ်ရမယ် မထင်ဖူးခင်ဗျ။ အဲ့လို ခဏခဏ လုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမီလဲ ဂျ။..
Enroll ပြန်လုပ်ရမှာလို့ ထင်တယ် နော်။ ကျောင်းမတတ်လို့။ ကျောင်းခဏ နားခိုင်းတာ။ အကောင့်တော့ ဘာမှ မလုပ်ပါဖူးဂျ။ ကျွန်တော်ကတော့။ အွန်လိုင်း ၀င်တိုင်း။ အမ်ဇက် တက်တယ်။ ဖိုရမ်မှာက လော့အင်မ၀င်ပဲ လျှောက်ဖတ်နေတာ။.. ) edu မှာာတော့ ဒီလို လုပ်လို့ရတော့ဖူး.. ။
ပြောထားသေးတယ်နော်။... ဆာတီဖီကိတ်လဲ ထုတ်ပေးမှာတဲ့။
အားပါးပါး...ဒါဆိုရင် ကိုယ်တို့တော့ ထမင်းစားစရာအလုပ်တစ်ခု ရတော့မယ်။
Edu သင်တန်းအတွက် Reference book ဖြစ်ပေမယ့်၊ စိတ်၀င်စားသူတွေလဲ ဖတ်နိုင်အောင် ဒီမှာပါ လင့်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးဖတ်ကြည့်ကြပါ။
4shared ကို Access Denied လုပ်ထားပါတယ်ဗျာ ... internet cafe တွင်လည်း ကျော်ခွရန် ခက်ခဲနေပါသဖြင့် ... တခြားလင့်ကပြောင်းတင်ပေးစေလိုပါသည် ကို TweetyCoaster ခင်ဗျား ....:)
ကျော်ခွရန် ခက်ခဲသူများအတွက် ...နောက်တစ်ခုနဲ့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..
down လိုက်တယ် ကိုတာယာ ရေ။ edu တောင်မ၀င်ရသေးဘူး...edu ရဲ့ course ကိုကောင်းကောင်းသိလိုက်ရပြီး။
နောက်ထပ် Link တွေပါ။အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ :d
From Zshare.net ref-01-eh101.pdf - 1.95MB
[url="	http://www.adrive.com/public/fc4a19a1eaacecb213e1961b2c9865248909cc3c1a3e51a78e7e81906547dee5.html"]From Adrive ref-01-eh101.pdf - 1.95MB[/url]
DivShare File - Ref-01-EH101.rar
အနော်ကတော့ Adrive နဲ့တော်တော်လေး ok တယ်ဗျာ။thz..ကို exiter
How can I attend MZ Edu. I am from outside of Myanmar.
edu မှာ sign up တော့လုပ်ပြီးသွားပြီး ဒါပေမယ့် activate မလုပ်ရသေးလို့ မ၀င်ဖြစ်သေးဘူး။
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ အမြန် activate လုပ်မှပဲ။
Hello! My Brother
I want to only suggest to your web. It's not command.:) Only advise.
I found the another web it's address is "http://www.yamc.info/forum/viewtopic.php?f=41&t=3231&p=26924#p26924url" .:5:
It web is created to write with myanmar font. It is very easy to use. Especially the poor internetuser like me.:5:
ကိုသွားလို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ Problem loading ပဲပြနေပါတယ်... သင်တန်းတက်ချင်ပါတယ်ကူညီပေးပါဦး
မရှိတော့ဘူး ဘယ်သူမှမအားတာနဲ့ မသင်နိုင်ကြတော့ဘူး
တကယ်တက်ကြတဲ့လူ ဘယ်လောက်မှမရှိပဲနဲ့ ထိမ်းသိမ်းရတာ တာဝန်ပိုကြီးတာ အဖတ်တင်လို့ ပိတ်ထားတာပါ။ သင်ချင်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုသင်ချင်တာလဲ ပြောပြပါ သိရင်အကြံပေးနိုင်ပါတယ် လူတစ်ယောက်ထဲအတွက်တော့ ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဖွင့်တယ်ဆိုတာက သင်မယ့်လူကလည်း အချိန်ပေးရတယ် Course Materials တွေလည်း အများကြီးပြင်ဆင်ရတာပါ လွယ်လွယ်ကူကူကိစ္စ မဟုတ်လို့ပါ။
I want to learn JAVA programming. Please, guide me.
လက်ရှိပညာရေး − ဘာတက်နေသလဲ ဒါမှမဟုတ် ဘာဘွဲ့ရသလဲ
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု − ကွန်ပျူတာကို လက်ရှိဘာအတွက်သုံးနေသလဲ
ပရိုဂရမ်မင်းအခြေခံ − အရင်ကဘာ Language တွေသင်ဖူးသလဲ
သင်ချင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် − ပရိုဂရမ်ရေးဖို့ ဘာလုပ်ဖို့အတွက် သင်ချင်တာလဲ
အပေါ်မှာ မေးထားတဲ့ အချက်တွေကို အရှိတိုင်းဖြေပေးပါ အဲဒါဆိုရင် သင့်လျော်တဲ့ ဖတ်ရမယ့်အကြောင်းအရာ အကြံပေးနိင်ပါလိမ့်မယ်။
You still need to answer, what kinds of program do you need to develop such as Windows Application, Web, Mobile, ... ?
August 2013 edited August 2013 Registered Users
ဒီ program တွေက ဘာလိုကွာခြားတာလဲ။ unicode ကို download ချလို့မရဘူး။ please ပြောပြပေးပါ။
Unicode Guide က Forum Banner အောက်က Announcement ကိုဖတ်မှာ အဲဒီမှာ Download လုပ်လို့ရပါတယ် Manual, Fonts, Keyboard အားလုံးပါပြီးသားပါ အဲဒီအထဲက Manual ကိုဖတ်ရင်ရပါလိမ့်မယ်။
Windows, Web, Mobile ဆိုတာကတော့ ရှင်းဖို့လိုအပ်မယ်မထင်ပါဘူး ကျွန်တော်က ဘာစိတ်ဝင်စားပါလို့ ပြောမှာမဟုတ်လို့ပါ ကိုယ်တိုင်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်မှာလဲ ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါတယ် ဘွဲ့ရအရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်လို့ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်သလဲကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ အဲလိုပြောလာရင် သင့်လျော်မယ့်စာအုပ် ရှာပေးလို့ရပါတယ် လေ့လာချိန်ဘယ်လောက် လိုအပ်မလဲ စတာတွေကို အကြံပေးလို့ရပါလိမ့်မယ်။
store ဆိုင်တစ်ဆိုင် အကြောင်းရေးချင်လို့။ C# သင်ထားတာကြာပြီ ဒါပေမယ့်ရေးချင်လို့ ဘာစာအုပ်လေ့လာရင်ကောင်းမလဲ။
Warning: Only Unicode is allowed in this Forum.
Edited by CalmHill.
Training စာအုပ်တော့ မဟုတ်ဘူး စာမေးပွဲအတွက်စာအုပ် C# သင်ဖူးတယ်ဆိုတော့ အဲဒါတစ်ခါတည်းဖတ်ရင်ရပါလိမ့်မယ်။
Chapter 12 ခုပါတယ် ၄ ပါတ်ကနေ ၅ ပါတ်အထိပဲ အချိန်ပေးပြီးပြီးအောင်ဖတ် လေ့ကျင့်ခန်းကိုအပြီးလုပ်ပါ။ Chapter 6, 7, 8 ဟာ အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ ေမးရင် Unicode နဲ့ပဲရေးပါ Zawgyi နဲ့ Forum မှာလက်မခံပါဘူး။
I want to learn Database for small shop